izithombe / vr
Isingeniso ekwakhiweni kwezakhiwo, amathemba okuqashwa ahle
Isingeniso ku-Architectural Design Idizayini yokwakha, ngomqondo obanzi, isiyalo esifundisisa ukwakhiwa nemvelo yaso. Ukwakhiwa kwezakhiwo kuyindlela ehlanganisa ubuchwepheshe bezobunjiniyela kanye nobuntu nobuciko. Ubuciko bokwakha nobuchwepheshe obubandakanyeka ekwakhiweni kwezakhiwo, kanye nezici zobuhle nezisebenzayo zobuciko bokwakha njengobuciko obusebenzayo, yize zihluke ngokusobala kepha zihlobene kakhulu, futhi isisindo sazo sincike esimweni esithile nasekwakhiweni kwesakhiwo. Ehlukile futhi ehluke kakhulu. Ukwakhiwa kwezakhiwo kuvame ukwenziwa phakathi kwesinqumo sokwakha ...
I-China Railway Construction Changyang International City Yakha Izakhiwo Zokuhlala nge-Deep Vi ...
Ubumnene besakhiwo buvela emibonweni nasekugqugquzelweni okuthwele, futhi ukuba nobumnene ukufeza okuhle okungcono. Ukwakhiwa Kwezitimela KwaseChina · I-Changyang International City, etholakala e-Changyang, e-Fangshan, izokwakha ikhaya elinobungqabavu obujulile futhi isebenzise inhloso yokwakha indawo yokuhlala yalowo mkhiqizo. Ubungqabavu = ukukhanya kwelanga + kwezempilo + induduzo + ukwehlukahlukana I-China Railway Construction inamathela kumqondo ogxile kubantu womphakathi wokuhlala osezingeni eliphakeme wamamitha-skwele angama-280,000-China Railway Construction · Changyang International City. Ukwakheka okulula kwezakhiwo kanye ...
I-China Railway Construction Changyang International City: Umphakathi we-Sunshine Building Anxin Community
Kubantu, impilo ibaluleke kakhulu, futhi impilo nokuphepha bacabanga ukwesaba impilo. Ukwakhiwa Kwezitimela KwaseChina · I-Changyang International City, ethola udumo lwamabhizinisi aphambili angama-500 emhlabeni, izibophezele ekwakheni izindawo zokuhlala brand eningizimu-ntshonalanga yeBeijing enesibopho esiphakeme sezenhlalo zamabhizinisi aphakathi nendawo, egxile ezindaweni ezibalele neziphilile nokwakha indawo ephephile umphakathi. Amamitha-skwele angama-280,000 womphakathi omsulwa wokukhanya kwelanga okumsulwa China Railway Construction · I-Changyang International City ithobela umqondo wobuntu, igxile empilweni enempilo, ngokucophelela ...
Kuyini ukwakhiwa kwezakhiwo futhi zithini izimiso zayo
Kuyini ukwakhiwa kwezakhiwo Ukwakheka kwezakhiwo kubhekisa kulokho ngaphambi kokuba kwakhiwe, umklami, ngokomsebenzi wokwakha, wenza ukucabanga okuphelele kusengaphambili ngezinkinga ezikhona noma ezingaba khona enqubeni yokwakha kanye nenqubo yokusetshenziswa, bese enza isisombululo kulezi zinkinga Kuvezwa imidwebo nemibhalo. Njengesisekelo esivamile sokulungiselela izinto ezibonakalayo, inhlangano yokwakha nezinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi emsebenzini wokukhiqiza nowokwakha. Kuyinto elula ukuthi wonke umsebenzi wenziwe ngejubane elihlangene ngokusho kokunqunywa okunqunyelwe ngokucophelela ...
Ikheli:A2301, Poly Universe Plaza, Tianhebei RD., Tianhe District, Guangzhou, China
Ucingo:+86 8398 0471
Icici Elihlangene Lwebambo, I-Ws2812b Led Strip, Amacici Round, Amacici Egolide Izindandatho, Amacici Egolide Ayindilinga 18k, Icici legolide,